Daqiiqaddii ugu dambeysay: Bandoo la Xaddiday 4 maalmood iyo Tallaabooyin cusub ayaa yimid | RayHaber | raillynews
HomeGUUDDAQIIQADII MINUTEcoronavirusDaqiiqadihii ugu dambeeyay: Bandoowga waa la xadiday 4 maalmood, waxaana la socdaa tallaabooyin cusub
11 / 05 / 2020 coronavirus
Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan wuxuu sameeyay bayaanno muhiim ah ka dib Golaha Wasiirada ee Madaxweynaha. "Bandowga waxaa mar kale la adeegsan doonaa May 16-17-18-19," ayuu Erdogan ku sheegay hadal uu soo saaray. Kulankaas, oo uu Erdogan ku dhawaaqay go’aamadiisa toddobaadlaha ah ee cinwaankiisu yahay Qaranka, waxaa lagu soo rogi doonaa bandow 19-maalmood ah oo ku beegan 16-ka May 17-18 -19, kaasoo ay kujirto xuska 4-ka May ee Atatürk, Dhallinyarrada iyo Ciyaaraha. Hadalada Madaxweynaha ayaa ah kuwa soosocda:
Maalmihii xayiraadaha bandooga, waxaan ka caawinay dadka magaalada inay socodsiiyaan xayawaanka guryahooda ayna quudiyaan xayawaanka darbi jiifka ah. Baadhitaankii ugu horreeyay ee dalkeenna lagu helo, ummaddayda qaaliga ah, waxay ahayd 10 bilood illaa 2-kii Maarso. Waxay sii wadeysaa inay la dagaallanto 83 milyan oo ka dhan ah cudurkan faafa. Bukaannadayada soo-kabashada iyo daryeelka degdegga ah ayaa soo fiicnaanaya. Sawirka quruxda badan ee horteena ayaa noo horseeday inaan qaadno tillaabooyin ku saabsan geeddi-socodka caadiga ah ee nolosha iyadoo la yareynayo xaddidaadaha qaarkood ee geedi socodka caafimaadka. Waxaan galnay xilli cusub. Way cadahay in dunidu qaadan doonto waqti dheer si looga gudbo cudurka faafa.
Muwaadiniinteenna waa inaysan u arkin tillaabooyinka caadiga ah ee nolosha caadiga ah inay soo laabanayaan kahor 10-ka Maarso. Waxaa jira tusaalooyin sida dayaca yar uu u horseedi karo ilaa heerka dillaaca. Kuwa kabax la'aan shaqo dhab ah oo muhiim ah, kuwa gudaha ah iyo banaanka jidadka, waxay gacmahooda ku quudiyaan fayraska. Waxaan sii wadnaa halgankayaga si la mid ah oo aan u aqbalno una socodsiinno xaqiiqadan. Waxaan rabaa talaabooyinka caadiga ah ee aan qaadno in lagu qiimeeyo qaab dhismeedka sharciyadaan. Gabi ahaanba uma soo noqono waayihii hore, waxaan isku dayeynaa inaan nolosheena ka dhigno mid sahlan inta lagu jiro cudurka faafa. Waxaan dib u eegeynaa shaqadeena socota oo aan dhameystirnaa waxyaabaha naga soo gaara.
Qaddarka lacagta caymiska SSK iyo Bağ-kur, oo aan dib u dhigney 6 bilood, waxay gaartay 40 bilyan oo liras ah. Faafida kadib, waxaan rabnaa inaan wadankeena u keeno meel ka faa iidaysan siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaanba. Waxaan sii xoojin doonnaa gaashaanka ilaalinta bulshada. Waxaa naga go’an inaan xoojino qarankeena iyo dalkeena, hormarka iyo xoojinta.
Ku darista xarumaha caafimaad ee gaarka loo leeyahay iyo sidoo kale xarumaha caafimaadka bulshada ee bixiya heerarka sare ee adeegyadu waxay gaar u yihiin dalkeenna. Waxaan baarnay dhismaha Isbitaalada Yeşilköy iyo Sancaktepe iyo isbitaalka Hadımköy. 21-ka May, waxaan cusbitaalka la furi doonaa Raiisul Wasaaraha Japan Mudane Abe. Waxaan jecelahay inaan u mahadceliyo shaqaalaheenna dadaalkooda ay sabab u tahay hay'adda amniga bulshada usbuuca ee Maajo 11-17. Intii lagu gudajiray muddadii cudurka faafa, waxaan daboolnay 43 dawo oo dheeri ah. Waxaan rumeysanahay in aan horumarin doonno wax soo saarka iyo shaqaaleysiinta iyadoo aan sii wadno guulaha aan ka hortageyno cudurka faafa ka dib faafa.
Waxaan siinay muwaadiniinteena 11 sano jirka ah fursad ay ku aadaan jidadka inta udhaxeysa 15 iyo 65 saacadood shalay. Waxaan ku faraxsan nahay inaan aragno muwaadiniintan oo raacaya qawaaniinta. Jimcaha, kooxda da'da 15-20 ayaa ka faa'iideysan doona isla fursaddan. Haddii aysan jirin wax dayacaad ah, waxaa lagu dabaqi doonaa toddobaadyada soo socda. 16-17-18-19 Meey, bandoowga ayaa mar kale la adeegsan doonaa.
Immisa maalmood ayaa bandoowgu ku jiraa Ciidda? Mamnuucitaankee? Suuqyada iyo Weelashadu furan yihiin…